Vehivavy Ekoatoriana iray Mpakasary, Miampanga Ny Fanararaotana Ataon’ireo “Klinika Mpitsabo ny Aretina Pelaka” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Mey 2017 12:12 GMT
Vakio amin'ny teny čeština , Français, Português, English, Ελληνικά, Nederlands, Español
Pikantsarin'ilay lahatsary “Mandra-piovanao” notontosain'i Paola Paredes ary zaraina ao amin'ny Vimeo.
Amin'ny alàlan'ny andian-tsary Until you change (Mandra-piovanao), ampangain'ilay ekotoriana mpanakanto, Paola Paredes, ny fisian'ireo ivontoerana miasa an-tsokosoko natao “hitsaboana” ny aretina pelaka ao Ekoatora. Ny ankamaroan'ireny ivontoerana tsy ara-dalàna ireny no miafina ao ambadiky ny antsoina hoe “klinika” miankina amin'ny finoana mba hanasitranana ny fiankinandoha amin'ny zavamahadomelina na ny alikaola. Araka ny lazain'ilay vehivavy mpakasary, ireo lehilahy sy vehivavy mitia ny mitovy taovam-pananahana aminy, sy ireo nanova taovam-pananahana, ka nalefan'ny fianakaviany tany, dia hidin-dry zareo ary ampiharany herisetra sy fanambaniana. Ao amin'ny tranonkalany, maneho hevitra ilay mpanakanto :
Taona efatra lasa izao no nandrenesako voalohany ny momba ireny “klinika” ireny izay miteny fa mitsabo ny aretina pelaka eto Ekoatora. Voalohany indrindra dia noheveriko fa mety ho izaho ny iray amin'ireny vehivavy tazonina [any amin'ny iray amin'ireny ivontoerana] ireny, ary, amin'ny maha-vehivavy tia vehivavy ahy, dia tsy maintsy miova aho. Taona roa taty aoriana, nitsotra ny zavatra rehetra tamin'ny fianakaviako aho ary neken-dry zareo izany. Ao amin'ny fireneko, betsaka ny tanora, lahy sy vavy, no tsy mba manana izany vintana izany.
Taorian'ny nanaovana fanadihadiana sy nitafàna taminà vehivavy samihafa izay efa nihiboka tao, naverin'i Paola Paredes naorina avy taminà andian-tsary iray ny fijoroana vavolombelona nataon'ireo niharany. Miaraka amin'ny sary tsirairay, nandraman'ilay mpanakanto ny mampiaina indray ireo sehatra, ireo zavatra rehetra ary ireo fomba notantaraina taminy. Noho ny fahasarotana amin'ny fandraketana ireo fomba fanao any amin'ireny klinika an-tsokosoko ireny, nanapaka hevitra izy fa izy mihitsy no hilalao hitana toerana ho toy ny iray amin'ireo mpiantsehatra ao anatin'ireo sariny. Araka ny afaka jerena ao anatin'ny asany, ampiharana endrika fanararaotana samihafa ireo vehivavy. Hatramin'ny fanerena an-terisetra hampiasa ankosotra, ny fanaovana zipo fohy dia fohy ary kiraro lava voditongotra mba “hanamafisana ny maha-vehivavy”, ka hatramin'ny herisetra ara-batana sy fandikàndalàna ho “fanitsiana”:
Sary iray avy amin'ity Until You Change (Mandra-piovanao), andian-tsariko vaovao ity. Eto Ekoatora, misy eo amin'ny 200 eo ireo ivontoerana misy mba “hitsaboana” ireo pelaka lahy sy ny vavy. Sarontsaronana amin'ny endrika klinika fanarenana ireo miankindoha amin'ny alikaola sy zavamahadomelina ireny ivontoerana ireny. Tazonina any tsy araka ny sitrapony, ireo olona voatàna ao dia iharan'ny fampijaliana ara-batana sy ara-pihetsehampo. Mba hanairana ny saina momba io olana io manoloana ny resaka zon'olombelona, izay mbola misy foana hatramin'izao, ary mitohy tsy voajerin'ireo haino aman-jery mahazatra, naveriko naorina ny tranga sasantsasany amin'ireny “klinika” ireny, tamin'ny alàlan'ny fifotorako tamin'ireo fijoroana vavolombelona avy amin'izay niharany. Izaho rahateo pelaka ary Ekoatoriana, nofidiako ny hitàna ny toeran'ny iray amin'ireo mpiantsehatra ao anatin'ireo sary. Natsofoko ho ao ny fihetsehampo avy amiko manokana sy ny zavatra niainako miaraka amin'ny fomba fisehoana an-tsehatra, mba hirsahana ny fanararaotana manjo ireo vehivavy any amin'ireny toerana ireny, ary nanao andian-tsary iray aho mifanaraka amin'ireo fijoroana vavolombelona nataon'ireo vehivavy nitafatafàko.
Tsy vao voalohany amin'izao ireo klinika “fanesorana ny aretina pelaka” ireo, amin'ny ankapobeny miankina aminà vondrom-pinoana, no efa naharaisana fitarainana. Tamin'ny 2012, nisy fanadihadiana maro natao taminà ivontoerana marobe ary ny tohin'izay dia nakatona izy ireny noho ny antony izay mbola manjavozavo ihany. Kanefa, apoitran'ny asan'i Paola Paredes fa ireny ivontoerana an-tsokosoko ireny dia manohy ny fisiany sy mbola manao ireo fomba fikarakarana heverina ho mifanohitra amin'ny fanajàna ny zon'olombelona. Ankoatra ilay andian-tsary, misy lahatsary iray azo raisina ihany koa ao amin'ny sehatra Vimeo izay mitantara ny dingana nizoran'ilay andian-tsary sy ireo zavatra mampihoron-koditra isankarazany nolalovan'ireo vavolombelona maro izay nanome antoka fa niaina azy ireny